5 Suuqgeynta Suuqgeynta Waxyaabaha Ay U Baahan Tahay Noocaagu Inuu Qaato | Martech Zone
5 Suuqgeynta Suuqgeynta Isbeddellada Astaamahaagu U Baahan Yahay Inay Korsadaan
Sabtida, Juun 25, 2015 Sabtida, Juun 25, 2015 Douglas Karr
Xilliyadaha Celceliska waxay bilaabeen degel bishii Maarso ee 2015 taas oo keentay 12% kordhinta duubista aaladaha mobilada / kaniiniga labadii usbuuc ee uhoreeyay, 3% oo ah kororka dakhliga intarneedka iyo 140% kordhinta dakhliga khadka tooska ah. Waxay ku dhammaystireen tan iyada oo loo marayo barta socdaalka ee hagaagsan, sawirro awood badan iyo hannaanka ballansashada fudud - ku xirnaanshaha isbeddellada dhijitaalka ah ee lala safrayo.
Si loo wanaajiyo safarka mobilada degelkeeda, kordhinta is-beddelka iyo soo bandhigidda khibrad sumcad wanaagsan oo la jaanqaadaysa qiimaha casriga ah ee shirkadda, Celebrity Cruises waxay la shaqeysay bixiyaha khibradda tikniyoolajiyadda macaamiisha. SDL iyo latalinta dhijitaalka ah Building Blocks.
Calaamadaha safarka adduunka waa inay qanciyaan baahiyaha rakaabka iyo martida shaqsi ahaan iyo khadka tooska ah, waqtiga dhabta ah iyo luqado badan. Tan macnaheedu waa hubinta khibrad la'aan, khibrad isdaba joog ah kanaalka iyo isdhexgalka. Si tan loo gaaro, suuqleyda waa inay hagaajiyaan istiraatiijiyadooda maaddaama habdhaqanka macaamiisha iyo dookhyadu ay is beddelayaan, iyagoo maanka ku haya shantaan isbeddel ee safarka dhijitaalka ah. Paige O'Neill, CMO, SDL
Warshadaha safarka ee caalamiga ah hadda waxay wajahayaan caqabad gaar ah oo ah qancinta baahiyaha socdaalka shaqsi ahaan iyo khadka tooska ah, waqtiga dhabta ah iyo luqado badan. Si loo gaadho loona dhaafo dalabyada socdaalka, magacyadu waa inay horumariyaan hanaan dheeri ah iyaga oo fahmaya socdaallada socdaalka 5 ee qaabeynaya mustaqbalka khibradda dhijitaalka ah.
5 Isbeddellada Socda ee Qaabeynta Mustaqbalka Khibradda Dijital ah
Kordhinta Bulshada - Socdaalayaasha aamusnaanta ma hadlaan oo waxay ku muujinayaan walaac khadka tooska ah iyagoo aan erey oran. Waxay adeegsanayaan aalado dhijitaal ah umana baahna inay dadku gacanta ku qabtaan
Shakhsiyeynta ku saleysan Xulashada - Socdaalayaasha culeyska badan waxaa hareeyay xulashooyinka khadka tooska ah. Iibiyeyaashu waa inay u gudbiyaan dadka safarka ah macluumaadka la bartilmaameedsaday, macluumaadka shakhsi ahaaneed oo ay ku hagaajiyaan CX ka wanaagsan
Dhiirrigelinta Khibradda Dijital ah - Muuqaal waa luqadda cusub ee xilligii dhijitaalka ahaa. Macaamiisha ayaa qiimeeya aragtida dadka kale in ka badan inta suuq-geyn kasta ku hadlaan
Qalalaasaha Mobilada - Uber iyo AirBnB ayaa tusaale u ah qas wadayaasha u xuubsiibtay aaladaha iskaashiga.
Is-Adeeg Digital - Maanta 39% Millennials-ka waxay safarkooda ku soo maraan metasearch halkii ay ka ahaan lahaayeen wakaaladaha safarka ee tooska ah ee internetka (OTAs) ama habsami u socodka bogga sida ay qabaan baarayaasha dhijitaalka ah. Calaamadaha safarku waa inay ka fekeraan wixii ka baxsan liisaska safarka iyo qodobka baahida u ah inay ku wada xiriiraan xaalad dhaqan si ay u gaarsiiyaan rajooyinka socdaalka adduunka.
Tusmada Muuqaalka waxay horseedaa Fahamka, Waxqabadyada iyo Ku-beddelka Baraha Bulshada
Suuqaaga ayaa u jooga inuu ku caawiyo
Yuri Shub (@Yuri Shub)
Jul 28, 2015 markay tahay 4:55 PM
Haye, maqaal weyn, mahadsanid!
maxaad u maleyneysaa inay tahay 3 waxyaabaha ugu muhiimsan ee barnaamijka jaale safarka cusub maanta?